Ny tsara indrindra amin'ny Surface izao amin'ny iPad misaotra Logitech | Vaovao IPhone
Ekeko izany Nanintona ahy hatrany amin'ny Microsoft's Surface aho: ilay fitendry izay hanoratantsika tsy misy fahasarotana, ny fahaizan'ny fitaovana ahafahantsika mampiasa zavatra marobe tsy misy fetrany, ny fanampiana any aoriana hametraka azy amin'ny toerana tena mampahazo aina antsika, ny tondro ... Na dia izany aza marina fa raha miresaka multitasking isika, ny kinova vaovao an'ny iOS 9 dia hamela antsika hanao izany tsy misy olana, farafaharatsiny amin'ireo maodely maoderina indrindra, ny ambiny amin'ireo lafiny izay tiako amin'izao fotoana izao dia tsy azon'i Apple farafaharatsiny.
Saingy noho i Logitech, azontsika atao ny mitazona ilay tranga vaovao vao nampidirina, Logitech Block, izay ahafahantsika ampio kitendry (apetaka amin'ny andriamby amin'ny fitaovana) ary boaty miaro miaraka amina fijoroana hametraka ny fitaovantsika amin'ny fironana mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika. Raha mihidy ny napetraka koa isika, mampidina ny iPad mankany amin'ny klavier, dia mahita fitaovana iray mitovy amin'ny tablette / laptop Microsoft Surface 3 isika.
Ny kalitaon'ireo tovolahy ao Logitech na ny famolavolana tranga sy ny famoronana kitendry dia heveriko fa dia tsy azo isalasalana. Ny kitendry farany azoko andramana avy amin'ny orinasa dia ny Key-to-go, mahatohitra ranon-javatra, keyboard tsara amin'ny habeny, touch, key travel, ergonomics ... zavatra izay mahazatra antsika.
Fa efa napetraka hividy keyboard ho an'ny iPad, ny zavatra tsara torohevitra sy mahazo aina indrindra dia ny fonony izay misy klavier ary izany dia ahafahantsika mamorona lamina mora fitaterana. Na ny fampiraisana ny fonony amin'ilay fitaovana miaraka amin'ny fitendry ary ny fanidiana hidirana ao amin'ireo fitaovana roa ireo dia ataon'ny andriamby, izay manome toky antsika fa tsy hisy tahotra ny hisokafany raha mbola itaterantsika azy io.
Ny fiorenan'ny Logitech Block aoriana azontsika apetraka amin'ny 20 ka hatramin'ny 70 degre izanytsy maninona na miraikitra amin'ny fitaovana ilay fitendry na tsia. Ny fiarovana ny tranga dia miaro ny fitaovantsika tsy hianjera tampoka. Tahaka izay mitranga amin'ireo klavier farany natolotra tao amin'ny IFA any Berlin, ny mpanamboatra dia nisafidy ny hanampy bateria tsy azo averina. Amin'ity tranga ity dia ity fitendry ity ampiasain'ny bateria roa karazana CR2032 Tsy miantoka ny herinandron'ny fiainana bateria tsy misy olana izy ireo.
Toy ny ankamaroan'ny kitendry natao ho an'ny iPad, eo amin'ny laharana voalohany dia ahitantsika ny ankamaroan'ny hitsin-dàlana amin'ny fanapahana iOS mahazatra, toy ny Siri, playback mozika, multitasking, bokotra hidy ... Ao amin'ny andalana manaraka dia ahitantsika ny laharan'ny isa miaraka amin'ny famolavolana nentin-drazana miaraka amin'ny endri-tsoratra mahazatra aseho amin'ny habe tsara. Mikasika ny fitendry, toy ny ankamaroan'ny maodelin'ity mpanamboatra ity, mamela antsika hanoratra lahatsoratra lava tsy misy mahazo aina na fiankinana lava hifanaraka amin'ny haben'ny keyboard sy ny lakile.
Ny kitendry Logitech Block Tsy mifanaraka amin'ny iPad Air 2 fotsiny izaoMilanja 645 grama izy ary mirefy 251,5 mm ny halavany, 184,5 mm ny haavony ary 22 mm ny sakany. Ny fifandraisana dia natao toy ny mahazatra amin'ny Bluetooth, manala ny ranon-javatra raha sendra sendra randrana ary misy LED amin'ny kitendry hanondroana ny asany. Logitech Block dia vidin'ny $ 129.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny tsara indrindra amin'ny Surface ankehitriny amin'ny iPad noho ny Logitech